Hambalyo Somalia. Hambalyo Madaxweynaha cusub | Somaliska
Waxaa farxad weyn inoo ah in doorasho cadaalad ah ay ka dhacdo magaalada Muqdisho muddo ka badan 20 sano. Waxaa kale oo farxad weyn inoo ah in uu isbedal muhiim ah ka dhacay Soomaaliya oo la doortay madaxweyne aqoon leh.
Waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan Soomaalida ku nool wadanka hooyo, daafaha caalamka iyo qaasatan asxaabta Sweden . Waxaan hambalyo qaas ah u dirayaa madaxweynaha cusub, waxaan leeyahay masuuliyada aad qaaday ilaahay hakula garab galo, oo si cadaalad ah iyo karti kii uga soo baxa Allah hakaa dhigo – Ameen.
September 10, 2012 at 20:29
CEERTAA KA RESANAYANA WADANKENA AADAYNA
abdi hayaacdo says:
September 11, 2012 at 14:48
waryaa afrika ha isku tagin waa gaajo meesha
Hambalyo Madaxweynaha cusub ee soomaaliya Hasan sheekh maxud qeyr alaha ka dhigo kii dalka iyo dadka wax u qabta alaha ka dhigo xilkiisana ilaahay hala garab galo xukuumad la shaqeysa oo umada danteeda ka hormarisa dantooda gaarka aha alaha ku aadiyo insha alaah.
September 10, 2012 at 22:32
aniga waxba ka sheegi maayo mana taageeraayo waayo waxaan ka baqayaan inuu noqdo sidii kuwii kahoreeyay marka amaantayda waa dib dhiganayaa
Madax wenaha umada somaliyet says:
September 10, 2012 at 23:09
Asc/dhaman- intas kadib madax wene, ha,iidanbeye? Mudane jimcale, fadlan nosoturjun, afaraha kujira wabka mangareshinka, aniga waxbo kama fahmin lakin, waxan ku arkay afaro badan o kahadlayo, familada, la,isukenayo mahad sanit?
Warbixinta,na, tariqda 10-9-2012/ u soqoray mangareshinka wale walagu jira
Asc Jimacaale horta marka hore hanbalyo guud ahaan Soomaaliya,Allena Ubxaanahu wa tacaalaa ha ka dhigo mid guta waajibaadka culus ee uu fahmi karo qof meel dheer wax ka eega, marka xiga waad iska celin weyday siyaasaddii Somalia, xooggaa isbedelka waan dareemmay balse waa farxad aan la qarsan karin intaasi waa iga kaftan, marka su,aashu waxay ka taagan tahay ma sii wadi doontaa arimaha siyaasadda Somaliya mise farxadda iyo hanbalyadaan ayaad ku koobaysaa.!!!!????
September 11, 2012 at 10:57
KKK wsc, sxb midaas waa ugu qabatay balse waxay iiga egtahay farxada iyo hambalyada. Waxaan aad ugu farxay in la doortay waji cusub oo aan ka qeyb qaadan burburka dalka. Somaliska.com sidii caadada ahayd waxa uu ku saabsanyahay arimaha bulshada iyo nolosha Sweden.
September 11, 2012 at 12:24
Asc sax Walaalkey Jimcaale runtiina waxaad ka mid tahay aqoonyahanadda da,da yar ee xataa ku taamaya in Soomaalideena Wadankan Sweden Illahay makaniyey inay ka sameyso isbedel weyn,markaan arkay cod ururintaadda qaarkeed howsha halkaas ka wad adigana waan kuu hanbalyeyneynaaa. Ogowna inaan adiga oo wanaag wada si kale laguu arko mar marka qaarkood,taaasna waan kuugu hanbalyeynayaa samirkeeda, Wabillaahi towfiiq,Asc.
September 11, 2012 at 09:06
waan soo dhaweeyay balse taageero waa hadaan arkaa inuu yahay madaxweyne cadaalad ah
wali ma fahmin wa maxaay donashada
Waligaa ha fahmin hadaadan fahmin dhacdooyinka ugu xamaasadda badnaa Somalia ee lagu dooranayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
As waad salaaman tihiin dhamaan umada soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan runtii waa farxad in aynu madaxweyne aan ka qayb qaadan xasuuqii aabayaasheen la doortay alle ha ka dhigo mid xilkaas culus ka soo baxa inagana ha inaga dhigo kuwo maqla oo adeeca aaamiim.
umada soomaliyed waxansodhwey Mayaa madax weynahacusub jamuriyada feedaralka e soomaliya wayo wayo waji cusub osiyasaded ayan galnay wax badana wan sugeynay mansha Allah halasoo duceeyo inan gaarno meeshsan hiigsaneyno
September 11, 2012 at 17:39
kayga raali galin ayaan kabixi naaya xoga yar wan qalday